Kalfadhiga 7aad Ee Baarlamaanka Somalia Oo Buuq Hadheeyey Markii Madaxweyne Farmaajo Khudbada Bilaabay – HCTV
0	June 6, 2020 2:51 pm
Muqdisho, (HCTV) – Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo maanta khudbad dheer ka jeediyay furitaanka kalfadhiga 7-aad ee Baarlamanka federaalka ah ee dalka ayaa waxa uu si weyn uga hadlay arrimaha doorashooyinka qaranka ee la filayo in dhammaadka sanadkan iyo bilowga sanadka soo socda ay ka dhacaan waddanka.
Inkastoo madaxweyne Farmaajo khudbadiisii maanta uu wax badan kusoo qaaday, haddana waa tii ugu dembeysay uu Kalfadhi furmayo uu Baarlamanka ujeediyo inta hadda lagu guda jiro muddo xileedkiisa dhammaadka ku dhow. Hase-ahaatee waxa uu maanta la kulmay buuq ka dhashay gudaha Aqalka xildhibaannada, maadaama xubnaha mudanayaasha qaar ay madaxweyne Farmaajo aysan la dhacsaneyn hannaanka geeddi socodka dowladdiisa.
Si kastaba-ha-ahaatee, waxaa si weyn loo eegayay khudbada Madaxweynaha gaar ahaan arrimaha doorashada qaranka, taas oo uu mar kale sheegay in la qaban doono doorasho ku qotonta qof iyo cod.
Ujeedada Dibad-Baxyo Ka Dhacay Magaalada Muqdisho